Any ivelany : nodimandry i David Bowie | NewsMada
Nindaosin’ny fahafatesana, ny alahady teo tany New York, rehefa niady tamin’ny aretina homamiadana nandritra ny 18 volana, i David Bowie, teratany britanika, mpihira malaza eran’izao tontolo izao, mpanoratra, « compositeur » sady mpilalao horonantsary ihany koa. Nanamafy izany fahafatesan’ity mpanakanto ity izany, tamin’ny alalan’ny tambajotra Twitter, ny zanany, Duncan Jones, mpanatontosa sarimihetsika.
Na tsy tampoka loatra aza izao fahalasanany izao, noho izany aretina efa nikiky azy izany, nanohina ny fon’ny mpankafy ny fotoana mamy nozarainy talohakelin’izao. Vao ny 8 janoary teo izy no nankalaza ny tsingerin-taona faha-69 nahaterahany. Nomarihiny tamin’ny famoahana vokatra vaovao izany ; rakikira mitondra ny lohateny hoe « Blackstar », izay efa nandrasan’ny mpankafy azy fatratra.
Nanomboka ny taona 70 ny lazan’i David Bowie, raha ny teo amin’ny tontolon’ny mozika, indrindra ny gadona « pop » sy « rock » no resahina. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe « Let’s dance » no tena nahafantarana azy. Teo amin’ny sehatry ny sarimihetsika, santionany amin’ireo nolalaoviny ny tamin’ny « La dernière tentation du Christ », an’i Martin Scorsese, ka izy no nitana ny anjara toeran’i Ponce Pilate.
Ny taona 2004, araka ny voalazan’ny gazety boky, Rolling Stone, laharana faha-39 i David Bowie amin’ny mpanakanto 100 malaza hatramin’izay ka hatramin’izao. Marobe ny mpihira sy mpanao sarimihetsika ary olo-malaza naneho ny alahelony, tao amin’ny tambajotran-tserasera (Facebook sy Twitter), manoloana izao fahafatesany izao.